မိုးရဲ့ဆန္ဒ | CeleTrend
July 27, 2020 by CeleTrend
မိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှန်ထဲမှာပြန်ကြည့်မိတယ် ။ ငါကဘာလဲ? ယောင်္ကျားလားမိန်းမလား? နှစ်ခုလုံးပဲလား?ဟုတ်တယ် နှစ်မျိုးလုံးပဲ မိုးမှာအချိုးအစားကျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ် ။ မိုး ထဘီရင်လျားထားရာက ချွတ်လိုက်တယ် ။ မိုး အရမ်းဝမ်းနည်းမိတယ် ။ လောကကြီးက ဘာလို့များမိုးအပေါ်ရက်စက်ရတာလဲ ။ လှပတဲ့ရင်အစုံ အနည်းငယ်ကားပြီးလုံးနေတဲ့တင် အဲဒါတွေနဲ့ လုံးဝမလိုက်ဖက်တဲ့ အရာ မိုး အောက်ကိုငုံ့ကြည့်တယ် ။ တကယ်ပဲကြည့်ရဆိုးတယ် ။ မိုးမှာယောင်္ကျားအင်္ဂါရှိ နေတယ် ။ အဲဒီအောက်မှာ မိန်းမအင်္ဂါလည်း ရှိတယ် ။ မိုးက မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်လား ။ မိုးအသက်၂၂ရှိပြီ ။ မိုး ဒီအရွယ်အထိ တစ်ခါမှဒိတ်မလုပ်ဖူးဘူး ။ မိုး အကြောင်းကို လူသိမှာကြောက်တယ် ။ အမြဲလူတွေနဲ့ကင်းဝေး ခဲ့ရတယ် ။ မကောင်းဆိုးဝါးဆိုတာ အရာအားလုံးကို ဖျက်ဆီးတတ်တယ် ။မိုးလည်း မိုးမိသားစုကို ပျက်ဆီးစေမယ်ဆိုတာ တကယ်မသိခဲ့ဘူး ။မိုးတို့ အိမ်မှာ မိုးဖေဖေရယ် အစ်ကိုရယ် ညီမလေးရယ်နေကြတယ် ။ မေမေကတော့ ညီမလေး ၅ နှစ်လောက်က ဆုံးသွားတယ် ။
မိုး ငယ်ငယ်က ယောင်္ကျားလေးလိုပဲနေတာ ။နောက်ပိုင်းကောက်ကြောင်း တွေက ထင်ရှားလာတော့ ဟန်ဆောင်လို့မရတော့ဘူး ။ မိုး အလယ်တန်းလောက်ကစပြီး တခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ ထိတွေ့မိရင် မိုး ဂွေးကတောင်လာတယ် ။ နောက်တော့ မိုးအိမ်မှာ ကိုင်ကြည့်တယ် ။ တဖြည်းဖြည်း လက်ထဲမှာ မာလာပြီး ရင်တွေလည်းတုန်လာတယ် ။ ဖွဖွလေး ဖျစ်ကြည့်လိုက် ပွတ်လိုက်နဲ့ မိုး အရမ်းကောင်းလာတယ် ။ အောက်ကဟာကလည်း ရွစိစိဖြစ်လာတယ် ။ တစ်ချိန်တည်း နှစ်မျိုးလုံးက ခံစားလို့ရတယ် ။ အဲဒီနေ့ကစပြီး မိုး အာသာဖြေတတ် လာတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူများတွေလို တကယ်ခံစားဖို့ ဆိုတာတော့ မိုး ဘယ်လိုမှ မကြိုးစားရဲဘူး ။ မကောင်းဆိုးဝါးကို လက်ခံမယ့်သူ ရှိတယ်ပဲထားဦး တွေ့ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူး ။ မိုးပိုသိလာတာက သာမန်ထက်ပိုပြီး လိင်စိတ်တွေက နိုးထတတ်တယ် ။ မိုးရဲ့ဆန္ဒတွေကို ဖြေရင်း တဖြည်းဖြည်းမိုးစိတ်တွေ ရှုပ်ထွေးလာတယ် ။ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် မကောင်းဆိုးဝါးလိုပဲ မကောင်းတာတွေပဲ တွေးနေမိတယ် ။
အဲဒီစိတ်တွေကြောင့် မိုး ဒီလိုအပြစ်ပေးခံရတာလား.. မိုးနေတဲ့မြို့က သေးသေးလေးပါ ။ ဒါပေမယ့် မြို့ပြတွေနဲ့ဝေးတော့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်က ပိုလှပတယ် ။ စမ်းချောင်းတွေ တောအုပ်တွေနဲ့အရမ်းလှတယ်လို့ ထင်မိတယ် ။ မိုးတို့မိသားစုက တောင်ကုန်းတစ်ခု ပေါ်မှာ နေတာ ။ အိမ်နီးချင်းဆိုတာ မရှိဘူး ။ အရမ်း တိတ်ဆိတ်တယ် ။ မိုးတို့အိမ်မှာ ဖေဖေရယ် အစ်ကိုရယ် ညီမလေးရယ် မိုးရယ် နေကြတယ် ။ မေမေကတော့ မရှိတော့ဘူး ။ ဖေဖေက သာမန်ရုံးဝန်ထမ်း တစ်ယောက် အစ်ကိုက ဆိုင်လေးတစ်ခု ဖွင့်ထားတယ် ။ ဂိမ်းဆိုင်လေ ။ ညီမလေးက တက္ကသိုလ်ပထမနှစ် မိုးကတော့ ဘွဲ့ရအလုပ်လက်မဲ့.. ကျောင်းပြီးကတည်းက နားနေတာ.။ ” မမိုး ကျောင်းနောက်ကျနေပြီ ” ညီမလေးအသံကြားမှ မိုးလည်း သတိရတော့တယ် ။ အဝတ်အစားမြန်မြန်ဝတ်ပြီး ထွက်လာရတယ် ။ အပြင်ရောက်တော့ ညီမလေးက ရပ်စောင့်နေတယ် ။ သွန်းယုလှိုင် သူ့နာမည် ။ ဂျပန်ကာတွန်းမလေးနဲ့တူတယ် ။ မိုးတို့ ညီအစ်မက အရမ်းတော့ မရင်းနှီးဘူး ရန်လည်း မဖြစ်ဘူး ။ ပုံမှန်ပဲဆက်ဆံကြတာ ။ ” တက် သွားမယ် ” သွန်းက နောက်က ထိုင်လိုက်တယ် ။ မိုးလည်း ဆိုင်ကယ်စက်နှိုးပြီး ထွက်လာတယ် ။ လိုက်ပို့ပြီးတော့ အစ်ကို့ဆိုင်ကို မောင်းလာတယ် ။ တစ်နေကုန် ကစားမယ် မီးမပျက်ရင် ။ ဟိုရောက်တော့ သူက ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတယ် ။
မိုးကို မြင်တော့ ” မိုး ဆိုင်ခဏ ကြည့်ပေးထားစမ်းပါ..ငါ အပြင်သွားစရာရှိလို့ ” ဟိုတစ်ယောက်က မိုးကို ရီပြနေတယ် ။ အစ်ကို့ ခါးကိုလည်း ဖက်ထားတယ် ။ မိုး ဒေါသထွက်တာလား မနာလိုတာလားမသိတော့ဘူး။ မကြည့်ချင်တော့တာနဲ့ ခေါင်းငြိမ့်ပြီး ဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တယ် ။ မိုးအစ်ကိုက ချောတယ် ။ ဆက်ဆီကျတယ် ။ မိုး စိတ်ကူးနဲ့ပြစ်မှားမိတာ ခဏခဏပဲ ။ သူ့နာမည်က ဖြိုးဝေ.. သူတို့ဘယ်သွားမှာလဲ မိုး အရမ်းသိချင်တယ် ။ နာရီဝက်လောက်ရှိတော့ မီးပျက်သွားတယ် ။ မိုးလည်း မီးစက်မနှိုးတတ်ဘူး ။ ဆိုင်ပိတ်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့တယ် ။ အိမ်ရောက်တော့ တံခါးက ပွင့်နေတယ် ။ သေချာတယ် ။ကိုဖြိုး သူ့ ကောင်မလေးကို ခေါ်လာတာပဲ ။ မိုးစိတ်တွေ အရမ်းလှုပ်ရှားနေတယ် ။ သူတို့ ဘာတွေလုပ်နေကြလဲ ။ မိုး ထင်သလိုပဲလား… တကယ်တော့ အဲဒါကို အပြင်မှာ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူး ။ ကိုဖြိုးအခန်းဆီခြေဖွဖွလေး လျောက်သွားတယ် ။ အခန်းတံခါးက ပိတ်ထားတယ် ။ နားကပ်ပြီး နားထောင်ကြည့်တယ် ။ အခန်းက ပျဉ်ခန်းဆိုတော့ အသံမလုံဘူး ။ မိုးကြားရတယ် ။ ငြီးသံတိုးတိုးလေး နောက်ပြီး အသားချင်း ရိုက်မိတဲ့အသံ ..မိုးရင်တွေ အရမ်းခုန်လာတယ် ။ ဂါဝန်ထဲမှာ ဂွေးကထောင်လာတယ် ။ အဖုတ်ကလည်းအရည် တွေစိမ့်ကျနေတယ် ။ မိုး ကိုယ့်အခန်းထဲကို ထွက်လာခဲ့တယ် ။ အခန်းထဲရောက်တော့ ပင်တီချွတ်လိုက်တယ် ။ ဂွေးက အရမ်းကို မာတောင်နေတာပဲ ။မိုး ပက်လက်လှဲပြီး ဂါဝန်ကို ခါးထိမတင်ကာ ဂွေးကို ကိုင်ပြီး အဖုတ်ကို ပွတ်လိုက်တယ်
ဝါးးးးး…အရမ်းမိုက်တယ် ။ မိုး ဂွေးဥတွေ တင်းလာပြီး သိပ်မထိတော့ဘူး ။ ဒါနဲ့ ဂွေးဥကိုမ အဖုတ်ထဲကို လက်ထည့် အဆက်မပြတ် ထိုးနေတယ် ။ မကြာဘူး မိုး လီးထိပ်က အရည်တွေ ပန်းထွက်လာတယ် ။ အဖုတ်ထဲကလည်း ထွက်လာတယ် ။ မိုး အရမ်းမောနေပြီ တစ်ပြိုင်တည်း နှစ်ခါပြီးတော့ အားတောင်ကုန်တယ် ။ ပင်ပန်းတာနဲ့ မျက်လုံးမှိတ်လိုက်တာ ဘယ် လိုအိပ်ပျော်သွားမှန်းမသိဘူး ။ နိုးလာတော့ ဗိုက်တော်တော်ဆာတယ် ။ ပင်တီ ပြန်မဝတ်တော့ပဲ မီးဖိုထဲဝင်လာတော့ ကိုဖြိုးက ထမင်း စားနေတယ် ။ ” ဟိုတစ်ယောက် ပြန်သွားပြီလား ” မိုး ကမေးတော့ ကိုဖြိုးက အေးဆေးပဲ ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ် ။ သူက မိုးကို ညီလို့ပဲ မြင်နေလားမသိဘူး ။ မိုးလည်းဝင်ထိုင်ပြီး ထမင်းစားလိုက် တယ် ။ ခဏနေတော့ ကိုဖြိုးက.. ” မိုး နင်ဘယ်တုန်းက ပြန်ရောက်လဲ ” ” မနက်ကတည်းက ” ” အကုန်ကြားရလား ” ” အင်း ” ” ငါလည်းကြားတယ် ” ” ဘာကိုလဲ ” ” နင့်အခန်းထဲက အသံ” မိုး အာသာဖြေတာ အသံထွက်မိလား.. မိုးတောင် မသေချာဘူး ။ ” ကြည့်ချင်လား မိုးဘယ်လို လုပ်တယ်ဆိုတာကို ” ” နင့်မှာ နှစ်ခုရှိတယ်ဆို.. အဲဒါနှစ်ခုလုံးအလုပ်လုပ်လား” ” မိုးပြမယ် ကြည့်မလား ” ” တကယ်ပြောတာလား ” မိုး မတ်တပ်ထပြီး ဂါဝန်လှန်လိုက်တယ် ။ ပင်တီ မပါတော့ မိုးလီးက ထောင်မတ်နေတယ် ။ သူက အောက်ကိုကြည့်နေတယ် ။ ဂွေးဥက ကွယ်နေတော့ မိုး မပြ လိုက်တယ် ။
” မိုးယုလှိုင် နင်က မယုံနိုင်စရာ ဖန်တီးမှုတစ်ခုလိုပဲ ” မိုး ကိုယ်တိုင် ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ မယုံနိုင်ဘူး ။ ကိုယ့်အစ်ကိုကို ဂါဝန် လှန်ပြမိတယ် ။ သူကလည်း ကိုယ့်ညီမကို မျက်လုံး ကျွတ်မတတ် ကြည့်နေတယ် ။ မိုး ပြန်အုပ်လိုက်တယ် ။ မိုး မနေနိုင်တော့ဘူး ။ ဒီအတိုင်းဆို တစ်ခုခုလုပ်မိတော့မယ် ။ မိုးနောက်အ လှည့် ကိုဖြိုးက နောက်ကနေ ဖက်လိုက်တယ် ။ ” ဘာလုပ်တာလဲ မိုးက ကိုဖြိုးညီမလေ ” ” အင်းဆက်ဆိုတာ မကြားဖူးဘူးလို့မပြောနဲ့ ပြီးတော့ နင်ကစတာ နင်ရှောင်မပြေးနဲ့ ” ကိုဖြိုးက မိုး လည်ပင်းကို နမ်းနေရင်း လက်က နို့ကို ကိုင်ထားတယ် ။ ပင်တီမပါတော့ ကိုဖြိုးဟာက မိုး ဖင်နဲ့ကပ်နေတာ ခံစားမိတယ် ။ မိုးလည်း အရမ်းလိုချင်တယ် ။ သူက မိုး ဂါဝန်ကို မတင်ပြီး မိုး လီးကို နောက်ကနေ ဂွင်းထုပေးနေတယ် ။ မိုး နံရံကို လက်ထောက် ထားပြီး သူလုပ်သမျှ ခံနေလိုက်တယ် ။ မိုးအဖုတ်ကလည်း အရည်တွေ ရွဲနေပြီ ။ သူက ဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်တယ် ။ မိုး အသင့် ဖြစ်နေပြီဆိုတာ သူသိတယ် ။ သူက မိုး အဖုတ်ကို သူ့လီးနဲ့တေ့လိုက်တယ် ။ ” ခဏ ကိုဖြိုး ဒါက မိုး အတွက် ပထမဆုံးပဲ ” သူက ဘာမှပြန်မပြောပဲ စသွင်းတယ် ။ မရပ်ဘူး..။ ” အား ကိုဖြိုး အ အ အရမ်းနာတယ် ” မိုး ပြောလို့ မရဘူး ။ သူက အတင်းထည့်နေတယ် ။ တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တာ မိုး ဗိုက်တောင်အောင့်သွားတယ် ။ အရမ်းလည်းနာတယ်။ သူက မရပ်ပဲ အတင်းကို လိုးတော့တယ် ။ လက်ကလည်း မိုး လီးကို ပွတ်နေတယ် ။ မိုး သုတ်တွေ ကြမ်းပေါ်ကျလာတယ် ။
အဖုတ်ကလည်း သိပ်မနာတော့ဘူး ။ အတင်းလုပ် ခံနေရပေမယ့် မိုး မရုန်းမိဘူး ။ ကိုဖြိုးက မိုး ထက်ပိုပြီး စိတ်ရိုင်းတယ် ။ ဒါပေမယ့် မိုး ကြိုက်တယ် ။ မိုးဖင်ကို နောက်ပြန်ကော့ရင်း သူ့ ဆောင့်ချက်တွေကို တုန့်ပြန်နေမိတယ် ။ ” နင့်လီးက ငါ့လောက်နီးနီးပဲ သုတ်လည်းထွက်တယ်.. အရမ်းမိုက်တယ် ” ” ဖြည်းဖြည်း ကိုဖြိုး မိုး နာတယ် ” ” အရမ်းကောင်းလို့ပါ မိုးရယ် နင်က တခြားမိန်းကလေးတွေထက် ပိုမိုက်တယ်ဟ ” ကိုဖြိုးက ပြောရင်း မိုး နို့တွေကိုင်ကာ ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်နေတယ် ။ ၁၅ ချက်လောက်ဆောင့်ပြီး မိုး ပြီးသွားတယ် ။ သူလည်း မိုး အဖုတ်ထဲက ထုတ်ပြီး မိုး ဖင်ပေါ် သူ့ သုတ်တွေ ထုတ်လိုက်တယ် ။ အတော်အကြာ မိုးတို့ နမ်းနေကြတယ် ။ ” အရမ်းမိုက်တယ် ငါ နင့်ကို ကြိုက်သွားပြီ ” ” မိုး ကတော့ မုဒိန်းကျင့်သလို လုပ်တာမကြိုက်ဘူး ” ” နောက်တစ်ခါ ငြင်သာပါ့မယ် ” မိုး ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံက ကြမ်းတမ်းပေမယ့် မိုး အတွက် မမေ့နိုင်စရာပါ ။ ……………… ညရောက်တော့ ကိုဖြိုးဆီက မက်ဆေ့ရတယ် ။ သူလာမယ်တဲ့ နေ့လည်က လုပ်ပြီးတာတောင် သူ ကျေနပ်ပုံမရဘူး ။ မိုး လည်း ထပ်လိုချင်သေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် နာနေတုန်းပဲ..။ နောက်နေ့မှလုပ်ဖို့မိုး ပြန်ပို့တယ် ။ ဖေဖေနဲ့ ညီမလေးလည်းရှိတယ် ။ မိသွားရင် ပြဿနာတက်မှာ..။ သူက ဘာမှတော့ ပြန်ပို့တော့ဘူး ။ မိုး အခန်းတံခါးကို လော့တော့ ချမထားဘူး ။ မိုး အိပ်ပျော်နေတုန်း မိုး နို့တွေကို လာကိုင်နေသလို ခံစားရတယ် ။
” ကိုဖြိုး ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ သိသွားလိမ့်မယ် ” ” အိပ်နေကြပြီ နင် မအော်ရင် သိစရာအကြောင်းမရှိဘူး ” ” ကိုဖြိုးကလည်း မကြမ်းနဲ့လေ ” ” ငါ အခုကြမ်းလို့လား ” ဟုတ်ပါတယ် ။ သူ အခု ငြင်သာမဲ့ပုံပါပဲ ။ မိုး သူ့လည်ပင်းကို ဖက်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းလိုက်တယ် ။သူကလည်း ပြန်နမ်းတယ် ။ ခဏနေတော့ မိုး တို့ လျှာတွေချင်း မိတ်ဆက်နေကြပြီ ။ မိုး နှုတ်ခမ်းမှာလည်း သူ့တံတွေးတွေ ပေနေတယ် ။ သူက နမ်းနေရင်း မိုး တီရှပ်ကို မတင်လိုက်တယ် ။ မိုး ရင်သားအလှကို သူ စိတ်ဝင်စားလာပြီ ။ သူ ဒီတခါတော့ ငြင်သာနေတယ် ။ မိုးဘရာဝတ်မထားတော့ တီရှပ်လှန်လိုက်တာနဲ့ မိုး ရင်သားတွေက အကာအကွယ်မဲ့ပေါ်လာတယ် ။ သူက ချက်ချင်းနို့သီးခေါင်းလေးကို စုပ်လိုက်တယ် ။ တစ်ဖက်ကိုလည်း ကပ်ပုံအတိုင်း ပွတ်ပေးနေတယ် ။ မိုး လီးကလည်း ထဘီထဲက ထိုးထွက်မယ့်အတိုင်းပဲ မိုးအတွက်တစ်သက် မရတော့ဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့ ခံစားမှုတွေကို လက်တွေ့ခံစားနေရတယ် ။ လေပေါ်က ပြုတ်ကျသလိုပဲ ရင်ထဲမှာခံစားနေရတယ် ။ ကိုဖြိုး လက်တွေက မိုး ထမီကို ချွတ်နေတယ် ။ မိုး လည်း အလိုက်သင့် ဖင်လေးကြွပေးလိုက်တော့ မိုး လီးက သူ့ ဗိုက်ကို သွားထောက် နေတယ် ။ သူက အောက်လျောလာပြီး မိုး လီးထိပ်ကို ငုံလိုက်တယ် ။ ” ကိုဖြိုး အဲ့လိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ မိုး မခံယူရဲဘူး ” သူက ဂရုမစိုက်ပဲ ဆက်စုပ်နေတယ် ။
လက်ကလည်း အဖုတ်လေးကို အကွဲကြောင်းအတိုင်း ပွတ်နေတယ် ။ ” ဟာ…မလုပ်ပါနဲ့ဆိုဟာ ” သူကရပ်ပြီး .. ” ဘာလို့လဲ ” ” ယောကျာင်္းတစ်ယောက်က အဲ့လိုလုပ်တာ မိုး မနေတတ်ဘူး ။ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးပဲ ဂေး လို့ ခံစားရတယ် ” ” ငါလည်း ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်း မသိဘူး နင့်လီးကို မြင်တော့ အလိုလို လွေမိသွားတာ ” မိုး သူ့ ပခုံးကို ဆွဲပြီးနမ်းလိုက်တယ် ။ ” အချိန်သိပ်မရဘူး တစ်ယောက်ယောက် နိုးလာလိမ့်မယ်” သူက ပြုံးပြတယ် ။ မိုး လေးဖက်ထောက်လိုက်တယ် ။ မိုး အတွက် ဒေါ့ဂီက အဆင်ပြေတယ် ရှေ့ကဆို မိုး လီးက ခံနေအုံးမယ် ။ သူက နောက်က နေရာယူပြီး မိုး အဖုတ် အကွဲကြောင်းကို ပွတ်ဆွဲနေတယ် ။ မိုး စောင်ကို ပါးစပ်အပြည့် ကိုက်ထားတယ် ။ အသံထွက်လို့ မဖြစ်ဘူး ။ နေ့လည်ကမှ ချယ်ရီပွင့်ထားတာ ဆိုတော့ နည်းနည်း နာနေတယ် ။ သူက ဒီတစ်ခါတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဝင်သလောက် သွင်းရင်း မိုး တင်ပါးကို ပွတ်သပ်နေတယ် ။ ပြီးတော့ တစ်ဆစ်ချင်း သွင်းလိုက်ဆောင့်လိုက်နဲ့ မိုး နီးတောင်လာနေပြီ ။ နောက်သူက အဆုံးထိ ထည့်လိုက်တယ် ။
မိုး မအော်မိအောင် ကိုက်ထားရတယ် ။သူကလည်း ရပ်ထားတယ် ။ ” နာသွားလား ” မိုး ခေါင်းခါပြလိုက်တယ် ။ သူက မိုး ခါးကို ကိုင်ပြီး မှန်မှန်လေး ဆောင့်နေလိုက်တယ် ။ မိုး လည်း ခေါင်းကို ချလိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်နဲ့ ဂွင်းထုနေလိုက်တယ် ။ မိုး လက်တွေ တဖြည်းဖြည်းမြန်လာပြီး အနောက်ကို ကော့ပေးသလို ဖြစ်နေတယ် ။ ကိုဖြိုးကလည်း မြန်လာတယ် ။ ဆောင့်ချက်တိုင်းမှာ မိုး ဂွေးဥက မိုး အစိလေးကို ရိုက်မိနေတယ် ။ မိုး မထိန်းနိုင်တော့ဘူး ။ မိုး လွှတ်ချမိတော့တယ် ။ မိုး လီးက ပန်းထွက်လာပြီး အဖုတ်ကလည်း ကြွက်သားတွေ ညှစ်ထားပြီး တဆတ်ဆတ်နဲ့ အရည် တွေထွက်လာတယ် ။ ကိုဖြိုးလည်း မိုး အဖုတ်ထဲက ထုတ်ပြီး ခပ်ပြင်းပြင်း ဂွင်းထုကာ မိုး ဖင်ပေါ် ပန်းချလိုက်တယ် ။ ” မိုး ဖင်ကို အိမ်သာမှတ်နေလား ” မိုး မောနေတဲ့အသံနဲ့ ပြောလိုက်တော့ သူက ရယ်တယ် ။ ပြီးတော့ မိုး လည်း မှောက်ချလိုက်တယ် ။ ပင်ပန်းနေပြီ .. သူလည်း မိုး အပေါ် ထပ်လျက်ပါလာတယ်။ ပြီး
အနုပညာအလုပ်တွေကို(၃)နှစ်တာရပ်နားထားတဲ့ ဦးချစ်စရာနဲ့ကြော်ငြာအတူရိုက်ခွင့်ရလို့ပီတိဖြစ်နေတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မတော်တဆဖြစ်မှုကြောင့် လက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ သူတစ်ယောက်ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့ ဟိန်းဝေယံ